How to fix "Screen overlay detected" error ( သင့်ဖုန်းမှာ Screen overlay detected ဖြစ်နေခဲ့လျှင် ) | Online Service Center Myanmar -->
How to fix "Screen overlay detected" error ( သင့်ဖုန်းမှာ Screen overlay detected ဖြစ်နေခဲ့လျှင် )
Android Phone တွေမှာ Screen Overlay Detected Error များ တက်ခဲ့ရင်
Permission Request တောင်း လို့ Allow ပေးရတဲ့နေရာ မှာ
Screen overlay detected ဆိုတာလေးပေါ်လာခဲ့ရင်တော့ အောက်ပါနည်းလေးတွေအတိုင်း
လိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ တစ်နည်းမရ တစ်နည်းနဲ့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
သင့် ဖုန်းထဲက Setting ထဲက Application ထဲသွားပါ
Clean Master, File Manager, Antiviru App တွေကို Install လုပ်ထားခဲ့ရင် Unistall လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
အခု တင်ထားတဲ့ပုံအတိုင်း တက်လာရင် Open Setting ထဲသွားပါ
Yes ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေ No ပေးလိုက်ပြီး On ဖြစ်နေတာ လေးတွေကို Off လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
အားလုံး လုပ်ပီး သွားရင် စက်ကို Restart ချပေးလိုက်ပါ Screen Overlay Detected ဆိုတာကြီးကို
အခြားသူတွေ ရေးထားတဲ့ နည်းတွေကိုတော့ အောက်မှာ ဝင်ရောက်ပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Ref : http://phandroid.com
So, you’ve received the “screen overlay detected” message and have no idea what to do. Well, follow this step-by-step guide, and be troubled no longer.
Problem apps: We replicated the problem using Drupe, but CleanMaster, Lux and Twilight have all been blamed for the problem.
Drupe is one of many apps that may be the cause of the error. / © AndroidPIT
Drupe can also beavictim of the screen overlay error, but here it is fixed. / © AndroidPIT
Ref : https://www.androidpit.com